kenya: Hogaamiyaha AL Shabaabta Kenya oo hanjabaad horleh u diray shacabka Kenya - Wargane News
Home Somali News kenya: Hogaamiyaha AL Shabaabta Kenya oo hanjabaad horleh u diray shacabka Kenya
Hogaamiyaha kooxda Al Shabaab ee kasoo jeeda Kenya Ahmed Iman Ali ayaa kasoo muuqday filim cusub oo ay kooxdaasi internetka ku baahisay, isagoo ka hadlay weerarkii bishii hore ka dhacay Ceel Cade ee askarta badan looga dilay ciidamada dowlada Kenya.
Ahmed Iman Ali oo ah hogaamiyaha kooxda Al Muhajiruun oo ah faraca Al Shabaab ee ka dagaalama gudaha Kenya ayaa sheegay in ay soo wadaan weeraro horleh oo lala beegsanayo ciidamada dowlada Kenya.
“…Balan Waxaa ah in dagaalkan uu sii socon doono illaa dowlada Kenya ay Calankeeda midabadiisa bedalaan oo ay ka dhigaan Casaas/Guduud kaliya…” isagoo ka wada in dhiig badan uu ku daadan doono gudaha dalka Kenya.
Wuxuu sidoo kale ku eedeeyey ciidamada Kenya inay xasuuq la beegsadeen muslimiinta ku dhaqan degmada Mandhera ee Kenya isagoo ka hadlay haween muslimiin ah oo xaamilo ah oo uu ku eedeeyey inay dileen ciidamada Kenya iyo waliba xasuuqyo kale oo ay ka geysteen gudaha wadanka Soomaaliya.
Hogaamiyahan ayaa sidoo kale sheegay inuu hada heysto dhamaan hubkii laga soo furtay ciidamadii Kenya looga dilay Ceel Cade isagoo yiri:
“…Dharka aan hada ku labisnahay waxaan aniga kasoo gatay oo kaliya Cimaamada aan wato, balse inta kale qorigan iyo dareeska aan xiranahay waa kuwii laga soo furtay ciidamada Kenya….Hadii ehelada askarta raadinayaan xogta wiilashooda ha ogaadaan Qorigan aan sito oo numberkiisu/sumadiisu tahay 490 aniguu gacanteyda ku jiraa….” ayuu yiri Ahmed Iman Ali oo intaasi sii raaciyey ehelada Askartii lagu dilay Ceel Cade inay lasoo xariiraan Al Shabaab si xog looga siiyo halkii ay ku danbeeyeen wiilashooda.
Somaliland: Oo Dariiq Diblamaasiyadeed U Martay Danaheeda Dalka Maraykanka.
Somaliland: International aid arrives just in time – but the hunger crisis is far from over
“Ciidamada Somaliland Way Guulaysteen, Kuwii Maamulka Puntland Way Firxadeen” Wasiirka Gaashaandhiga.